Ny fampiasana ny mpitrandraka rotary 1. Amin'ny fiandohan'ny asa dia tokony ho amin'ny toetr'andro ny mpitrandraka rotary. Voalohany, ny mpamboly rotary dia tokony ampifangaroina miaraka amin'ny tsanganana famokarana herinaratra mba hampitomboana ny hafainganan'ny fihodinan'ny vatan'ny fanapahana mankany amin'ny hafainganam-pandeha, ary avy eo ny mpiasa miodina dia tokony ...
Traktera mandeha an-tanana
Ny tracteur mandeha dia traktera kely iray, malaza any amin'ireo tanàna misy fitaovam-pitaterana sy milina fambolena, miaraka amin'ny motera diesel ho herinaratra, ny toetrany kely sy malefaka ary matanjaka dia mampalaza azy amin'ny tantsaha. herin'ny co anatiny ...
Ny fanjakana dia manome lanja lehibe ny asan'ny "fambolena, ny faritra ambanivohitra ary ny tantsaha", ny sakany sy ny faritra amin'ny fihenan'ny hetra amin'ny fambolena sy ny famotsoran-ketra dia vao maika nitombo, ary ny fanjakana dia mampitombo ny hamafin'ny fividianana fanampiana amin'ny milina. Ny milina fambolena ...
Ny mpamboly rotary dia karazana masinina miasa tany izay afaka mamita ny asan'ny plough sy raking miaraka amin'ny tracteur. Nampiasaina be dia be izy io noho ny fahaizany matanjaka mamaky ny tany sy ny faritra fisaka rehefa avy niasa. Mandritra izany fotoana izany dia afaka manapaka ny vodin-kazo milevina ambanin'ny tany izy, izay ...
Nojerena taminay ny fahitana mahavariana ireo sampan-kazo voahety volo, levon'ny vavonin'ny hazo haingana, ary namadika azy ireo ho sombin-kazo kely tao anatin'ny segondra vitsy monja. Ny antontan-taratasy foibe laharana 1 dia namelabelatra ny làlan'ny fampandrosoana ny fambolena, ny faritra ambanivohitra ary ny tantsaha. Izahay ...
Voakasiky ny fipoahana faharoa an'ny COVID-19, ny olona any ampitan-dranomasina dia nanomboka ny "orinasany legioma" ho azy. Ny fironana amin'ny fambolena legioma ao an-trano dia avy amin'ny fanidiana farany ny tanàna sy ny tsy fahampian'ny kojakoja. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nanavao ny fomban'ny growin ny vahoaka any ampitan-dranomasina ...
avy amin'ny admin tamin'ny 20-08-07
Borosy Cutter Grass: milina misy tanjona marobe dia azo ampifanarahana amin'ny loha tany malalaka, kodiarana manaisotra, antsy an-kady. Azo ampiasaina be amin'ny zaridaina, tanimboaloboka, zaridaina, zaridaina, tobin'ny legioma, zaridaina dite, tanimboly sy tontolo hafa. Kely ny milina ary maivana ny lanjany. Vehivavy mpikarakara tokantrano mahazatra ...
Ny firafitra sy ny fitsipiky ny fiasan'ny milina fogging 1. Ny milina fogging dia misy ampahany efatra: rano, faritra, lalan'ny solika, làlan-tsolika. Anisan'izany ny: carburetor, motera ary fipoahana fipoahana, fantsom-panafana, fantsom-panafarana hafanana, endriny, fitoeran-tsolika, boaty fanafody ranoka, tantana boaty, fanafody ranoka ...
Tractors misy kodiarana efatra
Tractors dia milina mandeha amin'ny herin'ny tenany ampiasaina hisintona sy handroahana ny milina miasa mba hamita ny asa finday isan-karazany. Afaka manao ny hery manosika miasa ihany koa. Amin'ny alàlan'ny motera, ny fandefasana, ny fandehanana, ny familiana, ny fampiatoana ny herinaratra, ny fivoahan'ny herinaratra, ny fitaovana elektrika, ny fanaraha-maso ny fiara ary ny tracti ...
Ny mpamboly rotary dia manana fahaizana matanjaka amin'ny fanapahana sy fanorotoroana ny tany, izay afaka manatratra ny voka-dratsin'ny tany izay tsy azo raha tsy amin'ny alàlan'ny fiasan'ny angadinomby sy ny fitrandrahana ankapobeny. Ankoatr'izay, ny faritra dia fisaka sy malefaka aorian'ny fikolokoloana rotary, izay afaka mameno ny fepetra takiana amin'ny ...
Ny tracteur mandeha dia karazana milina fitaterana sy fambolena malaza any amin'ireo vohitra sy tanàna any Shina. Ny habeny kely sy malefaka ary ny heriny matanjaka dia mampalaza azy amin'ny tantsaha. Mivadika ho any am-pelatanana izy io, arakaraka ny tanany ankavia sy havanana, izay tsy mitovy amin'ny s ...
Ditching machine dia tatatra, tany, zezika, fampidirana milina kely ho an'ny fambolena, ho an'ny traktera kely misy kodiarana efatra ho an'ny herinaratra, milina fanariam-pako mihantona telo-teboka, milina fametahana kapila roa. Ny halavan'ny hady kely dia manodidina ny 35 cm. Shichao furrow fer ...